Miyuu Aubameyang Seegi Karaa Kulanka Adag Ee Liverpool? - Bulsho News
Ka Dib Chalobah , Chelsea Oo Xiddig Kale Ka Saxiixaneysa...
Weeraryahanka Arsenal ee Aubameyang ayaa walaac ku abuuray taageerayasha kooxda ka hor kulanka ay sabtida la ciyaarayaan Liverpool ee horyaalka Ingiriiska .
Qeybta caafimaadka Arsenal ayaa calaamad su`aal saaray taam ahaanshaha laacibka ka dib markii uu waqti hore ka soo laabtay xerada tababarka qarankiisa Gabon ka dib jug soo gaartay.
Kulankii Libya ee Jimcihii ayaa laacibka lagu qaaday gaari xanbaar waana midda sii xoojisay walaaca laga qabo in kulankaas uu safan karo iyo in kale , waxaana waqtigaas xariirka kubadda cagta Gabon xaqiijiyeen in uu ku laabtay London .
Sida ilo ku dhaw Aubameyang gaar ahaan saaxibkiisa Bruno Mango u sheegay wargeyska Metro laacibka kulankaas waxa uu ku seegayaa dhaawac inkastoo Arsenal weli war rasmi ah ka soo saarin xaaladda laacibka .
Sidaas oo ay tahay , waxaa laacibka la arkay isaga oo niikinaya ka dib muuqaal toos ka ahaa Instagaramka ka dib ciyaartaas waana mid xoogaa hoos u dhigeysa wel welka .
Waxaa xusid mudan in Aubameyang uusan ciyaarin kulankii Masar iyo Gabon xilligaas oo qarankiisa lagu garaacay 2/1 xilli ka dib macalinka Gabon uu tilmaamay in laacibka dhaawac uu ku seegay kulanka .
Wariye Cabdicasiis Afrika oo u geeriyooday dhaawac kasoo...
Survivor expected to testify in Rittenhouse trial’s 2nd...
Colaadda Itoobiya: Waa kuma Soomaaliga ka mid noqday...
Xog : Glazer Oo Ogalaaday In La Eriyo...